MOS-P2: Sahaminta isha weyn ee sii kordheysa ee Microsoft Open Source - Qeybta 2 | Laga soo bilaabo Linux
Iyada oo tan qaybta labaad laga soo bilaabo taxanaha maqaalada "Microsoft Il furan " Waxaan sii wadeynaa sahaminta aan ku hayno buugaagta sii kordheysa ee sii kordheysa ee codsiyada furan soo saaray Giant teknoolojiyad de «Microsoft ».
1 MOS-P2: Microsoft Open Source - Qaybta 2
MOS-P2: Microsoft Open Source - Qaybta 2
"Bond waa isha furan, iskutallaabta guud ee qaab dhismeedka loogu talagalay la shaqeynta xogta la qorsheeyay."
“Intaa waxaa sii dheer, Bond wuxuu taageeraa de-serialization-luqadeedka kala duwan wuxuuna bixiyaa habab awood guud oo guud oo wax ku oolka ah xogta. Bond waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa Microsoft adeegyada ballaaran. "
“Linux, Bond waa in lagu dhisaa isku xiraha C ++ 11. Sidoo kale Clang (3.8) iyo GNU C ++ (5.4). Si kastaba ha noqotee, Clang ayaa lagula talinayaa maadaama ay ka dhakhso badan tahay qaabka culeyska culus sida Bond. "
"CCF (Qaab-dhismeedka Qarsoodiga ah ee Qarsoodiga ah) waa qaab-dhismeedka dhismaha xannibaadda iyo codsiyada xisbiyada badan oo ammaan ah, oo leh helitaan sare iyo waxqabad."
“CCF (Qaab-dhismeedka Qarsoodiga ah ee Qarsoodiga ah) waa qaab furan oo loo abuuray in lagu dhiso qayb cusub oo ah barnaamijyo aamin ah, helitaan sare, iyo waxqabad sare oo diiradda saaraya xisaabinta iyo xogta dhinacyada badan. CCF waxay awood u siin kartaa shabakado waaweyn oo qarsoodi ah oo buuxiya shuruudaha ganacsiga ee muhiimka ah, iyadoo siineysa habab lagu dardargelinayo wax soo saarka iyo korsashada shirkadaha istiraatiijiyadda ku saleysan isbaheysiga iyo tikniyoolajiyadda xisbiyada badan. Awoodsiinta awoodda Aagagga Fulinta ee Lagu Kalsoon Yahay (TEEs), fikradaha nidaamyada baahsan, iyo kribograafiyada, CCF waxay awood u siineysaa xisaab-xirnaanta diyaar-garowga ama xisbiyada badan ee shirkad kasta. "
"CNAB waa qeexitaan loogu talagalay baakadaha codsiyada la qaybiyey."
“CNABs waxay fududeeyaan isku-dubbaridka, rakibaadda iyo maaraynta codsiyada konteenarrada u dhashay iyo adeegyadooda la xiriira. Intaas waxaa sii dheer, waxaa loo samayn karaa si loo isticmaalo kaabayaasha ama adeegga aad u baahan tahay, maadaama aysan jirin wax iibiyayaal ah oo qufulan. Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa in si fudud loogu qaybiyo codsiyada kooxaha, ururada, iyo suuqyada, xitaa wadaagga khadka. Ugu dambayntiina, CNAB waxaa loo saxiixi karaa si qarsoodi ah, markhaati, loona xaqiijin karaa si loo hubiyo ilo lagu kalsoonaan karo. "
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" sahamintan labaad ee «Microsoft Open Source», waxay bixisaa barnaamijyo xiiso leh oo kaladuwan oo barnaamijyo furan ah oo ay soo saartay Giant Teknolojiyada ee «Amazon»; waana mid dan iyo faa iido weyn u leh, dhamaanteed «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » MOS-P2: Sahaminta weyn ee sii kordheysa ee Microsoft Open Source - Qeybta 2
Ubuntu 21.04 "Hirsute Hippo" beta ayaa hadda la siidaayay
LineageOS 18.1 horey ayaa loo sii daayay kuwana waa warkiisa